OBAMA: madaxweynaha dalka Mareykanka oo ku baaqey in m/weyne loo doorto Hillary Clinton. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Wararka OBAMA: madaxweynaha dalka Mareykanka oo ku baaqey in m/weyne loo doorto Hillary...
OBAMA: madaxweynaha dalka Mareykanka oo ku baaqey in m/weyne loo doorto Hillary Clinton.
Madaxweynaha Mareykanka, Barack Obama ayaa sharxay Sababta uu u Maleynayo in Hillary Clinton ay Mudan tahay in ay Xafiiska kala wareegto bisha Jannaayo, isaga oo sheegay inuusan jirin nin ama haweeney uga diyaarsan Hillary xilka madaxtinimada.
Khudbad uu ka jeeday shirweynaha guud ee Dimoqraadiga ee ka socda magaalada Philadelphia ayuu Barack Obama ku sheegay in Hillary Clinton ay tahay qof Aaminsan in wadanka uu wanaagsan yahay marka dadka midab-bada kala duwan ay isku yimaadaan oo ay mid noqdo.
Previous articleJabhadda Al-nusra ee dalka Suuriya oo xiriirkii u jartey Al-qaacida.
Next articleNatiijooyinkii imtixaanka dugsiyada sare oo wasaarada waxbarashada DF soo bandhigtey.